Fasaadka ay Ka Wadaan Muqdisho Kooxda BASADIIR "Kama Hadlayaan Miyaa Culimada Sheegato Hogaanka Majmacal Islaam Mise Raali ayay Ka Yihiin" -
HomeArimaha bulshadaFasaadka ay Ka Wadaan Muqdisho Kooxda BASADIIR “Kama Hadlayaan Miyaa Culimada Sheegato Hogaanka Majmacal Islaam Mise Raali ayay Ka Yihiin”
September 18, 2021 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Magaalada Muqdisho waxa maalmahaan ku sugan Nin la sheegay in uu yahay majaajiliisti u dhashay dalka Tansania magaciisa ay somalida u taqaan BASADIIR.Bale aan aheeyn Nin maajiliiste ah uuna yahay Nin soo gudbinaayo Fasahaad Toos ah.
Sida la sheegayo Waxa uu Magaalada Muqdisho ka dhigayaa SHOW waxaana la sheegayaa in lagu Soo galayo Lacag dolar ah .Waana Nasiib daro ayadoo ay jiraan walaalo somaliyeed oo u baahan in lagu caawiyo lacagtaasi.
Kooxda Hogaamineeyso BASADIIR Ayaa la sheegayaa Ujeedka ay Muqdisho u keeneen in ay tahay NGO ayna ku soo qaateen lacag fara badan iyo in ay Bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho Ku Fasahaadiyaan . waxaana ay bilaw u tahay in marka danbo la keeni doono kuwa ka sii waaweeyn. BASADIIR.
Dhanka Kale waxaa nasiib daro ah in ay ka aamuseen Culumadii Soomaaliyeed Iyo Wasaaradii Dhaqanka Iyo Arrimaha Diinta Soomaaliyeed .
Sidoo kale Culimada Ku Sugan Magaalada Muqdisho ayaa ah Kuwa ka hadlo Ama ka falceliyo Rabitaankooda Ma ahan Kuwo u adeega Diinta islaamka Iyo Waajibaadka ka saaran.
Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan culimo waaweeyn kuwaasi oo sheegta in ay yihiin hormuudka Culimada soomaaliyeed . hase ahaate kama hadlaan waxyaabaha ummada lagu fasahaadinayo waxa kaliya ay ka hadlaan waa in ay ka falceliyaan koox ka soo horjeedo fakirkooda iyo siyaasadooda waxaana aad moodaa in ay xooga saareen dhanka addunyada Waa nasiib daro.
Dhanka kale Culimada Soomaaliyeed Gaar ahaan kuwa ku sugan Muqdisho ayaa dhawaan ka hadlayay Iskuul laga furay Hargeeysa Kaasi oo lagu sheegay in ciyaalka lagu baro diinta Kirshtaanka sidoo kale lagu sheegay in ay maamulaan kuwa ah laga roonayaal .KHANIISYO iyo Haweeyneey Baadariyad ah. Hase ahaatee uma jeedaan Dhibta kale ee ka bilaabatay magaalada Muqdisho .
Ugu danbeeyntii Culimada somaliyeed iyo wax garadkooda waxa aan fareeynaa in ay ka hadlaan xumaanta ay kawadaan Kooxda BASADIIR EE Muqdisho Ku Sugan Culimada somaliyeed waxaan leenahay ilaahay ka xishooda ee ka hadla xaqa aamusnaanta iska joojiya.